Abasebenzi be-TMLTS, Umbhali kwiiNdaba zeSikolo zaNgoku: Iindaba zeSikolo sangoku
Izithuba zakutshanje zeTMLTStaff
Kufakwe kuyo umsebenzi by Abasebenzi ngoJulayi 23, 2021	• 0 Comments
I-Standard Chartered Bank yaseNigeria yokuGaya iPortal 2021: Kule nqaku, uya kufunda malunga nenkcazo yenkampani, izakhono zesicelo, iimfuno kunye neziqinisekiso. Abafakizicelo abanomdla kufuneka balandele isikhokelo esingezantsi kwisicelo esiphumeleleyo. I-Standard Chartered Bank-Sitsala abantu abanetalente. Ayaneli kukunika isibonelelo samava abo, ikwabonisa […]
Kufakwe kuyo umsebenzi by Abasebenzi ngoJulayi 23, 2021	• 2 Comments
Inkqubo yokutya ye-United Nations ye-2021: Eli phepha liza kukukhokela kulwazi lwamva nje malunga nendlela yokufaka isicelo seNkqubo yokutya yeHlabathi yeZizwe eziManyeneyo eNigeria kubafundi abaphumeleleyo kunye nabathweswe izidanga. Kule nqaku, uya kufunda malunga nenkcazo yenkampani, izakhono zesicelo, iimfuno kunye neziqinisekiso. Abafakizicelo abanomdla kufuneka balandele ulwandlalo olukhokelayo […]
Kufakwe kuyo umsebenzi by Abasebenzi ngoJulayi 23, 2021
INkqubo yeZizwe eziManyeneyo yeNkqubo yoKutya yeHlabathi yeJob 2021: Eli phepha liya kukukhokela kulwazi lwamva nje malunga nendlela yokufaka isicelo kwiNkqubo yeZizwe eziManyeneyo yokutya kwiNigeria yokufumana izidanga kunye nezidanga. Inkqubo yeZizwe eziManyeneyo yokuTya yeyona nkonzo inkulu ehlabathini elwa indlala kwihlabathi liphela. Umnqophiso weWFP […]
Kufakwe kuyo Uhlaziyo lweeScholarship by Abasebenzi ngoJulayi 23, 2021	• 0 Comments
Urhulumente waseColombia okwangoku wamkela izicelo zokufunda zeMSC kunye nePhD kubemi bamanye amazwe 2021/2022. Bona iinkcukacha ezithe kratya malunga neenkosi zaseburhulumenteni zaseColombia kunye nePhD Scholarship 2021. URhulumente waseColombia ubonelela ngezifundo kubemi bamanye amazwe abanomdla wokwenza iinkqubo ze-Specializations, Masters kunye ne-PhD eColombia. Zizibonelelo zemali ezinikezelwa kubemi bamanye amazwe, ukubuyisela […]
Kufakwe kuyo Scholarship by Abasebenzi ngoJulayi 23, 2021	• 0 Comments
Ngaba unomdla wokulandela inkqubo yakho yesidanga sokuqala eCanada? Ukuba ewe, nali ithuba lakho. Iyunivesithi yaseCanada ngeVanier Canada Graduate Scholarship imema isicelo esivela kubafundi abafuna ukwenza inkqubo yabo yesidanga kwiziko. Le nkqubo yokufunda ithathwa kwiiyunivesithi zaseCanada kunye nolwabiwo lweVanier CGS. Ngaphandle kokukhetha, […]
Kufakwe kuyo Uhlaziyo lweeScholarship by Abasebenzi ngoJulayi 23, 2021
Abafundi baseGoodnews abafuna uncedo lwezemali. IYunivesithi yase-Bhritane i-Exeter iyavuya ukubonelela nge-Undergraduate Global Excellence Scholarship kubafundi abafanelekileyo. Izifundo ziqala ngoSeptemba 2021. Bona iinkcukacha zendlela yokwenza isicelo apha ngezantsi. Le nkqubo iyafumaneka ukulungiselela abafundi ababhatalayo ababhatalayo abakwamanye amazwe abazakubhalisela unyaka wokuqala wokungena beqala ukufunda ngoSeptemba 2021. Njengomnye […]
Kufakwe kuyo umsebenzi by Abasebenzi ngoJulayi 22, 2021	• 1 Comment
Ukuqeshwa kwe-ExxonMobil eNigeria 2021: Eli phepha liza kukukhokela kulwazi lwamva nje malunga nendlela yokufaka isicelo se-ExxonMobil yaseNigeria Job inikezela ngeziqu kunye nabaphumelele kwizidanga. Kule nqaku, uya kufunda malunga ne-ExxonMobil Nigeria inkcazo yomsebenzi, izakhono zesicelo, iimfuno kunye neziqinisekiso. Abafakizicelo abanomdla kufuneka balandele isikhokelo esingezantsi kwisicelo esiphumeleleyo. […]
Kufakwe kuyo umsebenzi by Abasebenzi ngoJulayi 22, 2021	• 3 Comments
Ukuqeshwa kwabafundi kwi-ExxonMobil 2021: Ngaba ujonge imisebenzi ye-ExxonMobil eNigeria 2021? Ngaba ungathanda ukusebenza e-ExxonMobil? Kananjalo awuyi kucinga ukuba sikukhokela ngendlela onokuthi ufake ngayo isicelo sokuqeshwa kwabantu kwi-ExxonMobil eNigeria nangaphaya? Ukuba ewe, qhubeka ufunda. Ukuveliswa kweMobil eNigeria Unlimited (MPN) kunye nokuHlolwa kwe-Esso […]
Eyona Ndawo isebenzayo yeNtombi eyiNtombi eyi-2021 yezixhobo ze-Android kunye ne-iOS
Kufakwe kuyo amanqaku by Abasebenzi ngoJulayi 22, 2021
App Girlfriend eyiyo-ndiyayifumana, ngamanye amaxesha siyadikwa kwaye akukho mntu ungathetha naye, kwaye undithembe, yimvakalelo ebuhlungu leyo. Ukuba uyadika kwaye ulilolo kwaye ufuna iqabane, akukho ngxaki, ndiza kuba ndikubonisa usetyenziso olukhoyo lokuba nentombi kwaye uhlale uxhumekile kwi […]
Jonga ukuba kubiza malini ukufundisisa eSpain njengoMphambukeli kwi2021
Kufakwe kuyo Imfuno yo kwamkelwa, amanqaku, imfundo by Abasebenzi ngoJulayi 22, 2021
Njengomfundi onqwenela eSpain, kuya kufuneka uyazi iindleko zokufunda eSpain ngaphambi kokuba upakishe iibhegi zakho zelizwe lokulwa kweenkomo kunye nematriki. Ininzi into onokuyifunda espain, konke oku kukuqiniseka ukuba ufuna umdla ngaphakathi kwentliziyo yakho. Fumana ngakumbi ngezantsi. Imali yesikolo […]